२०७८ साल वैशाख १ गते देखि यी ५ राशिको चम्किन्छ भाग्य - Rising Dainik
काठमान्डौ : ग्रह गोचरका कारणले गर्दा यी पाँच राशिका मानिसहरूको समय राम्रो हुने भएको छ । उन्नति प्रगति, धन सम्पत्ति लगायत सबै कुराहरूले यी पाँच राशिलाई फाइदा नै फाइदा हुने छ ।
ओली नेतृत्वको सरकारका चार मन्त्रीको सांसद् पद खोसिएपछि संसद्मै रु’वाबासी, को–को परे का’रबाहीमा?
करियरकैलागी लक्ष्मीले दिईन् जीवनलाई डि’र्भोस र गरिन् ग’र्भपतन पनि (भिडियोसहित)
रातको समयमा कि’च्कन्याले यसरि फसाउन सक्छिन् पुरुषलाई ! यस्तो हुन्छ कि’च्कन्याको हर्कत थाहापाई राख्नुहोस !
प्रचण्ड-नेपालले कृष्णबहादुर महरालाई दिए यति ठूलो जिम्मेवारी !
February 9, 2021 Ramash Kunwar